Nagu saabsan - Zhejiang THOR Electric Co., Ltd.
Thor waxay ku saabsan tahay kahortaga waxyeelada waxyeelada soo gaarta. Waa hadafkeenna iyo himiladeenna inaan ku xirno caqabadaha macaamiisheena tayo sare leh, xalal qiimahoodu saxanyahay iyo wax soo saar - oo lagu dhameystiray adeegga macaamiisha oo aan lala tartamin iyo taageero farsamo.
Waxaa lagu daray 2006, Thor Electric Co., Ltd. Waxay dhistay wax kasta si ay u bixiso xalal ballaadhan oo lagu kalsoonaan karo oo xeel dheer iyo wax soosaar. noocyada iyo fasalada qabqableyaashayada iyo hirarka kiciya 20KA ~ 200KA (8/20 )S) iyo 15KA ~ 50KA (10/350 )S) ayaa la tijaabiyaa oo laga gudbiyaa dhamaan shuruudaha iyadoo lagu saleynayo fasalkooda. 2006. Ballanqaadka joogtada ah ee Thor ee u hoggaansamida RoHS waxaa ka mid ah dadaallada sii socda ee lagu yareynayo jiritaanka walxaha halista ah ee naqshadeynta iyo soo saaridda tiro sii kordheysa oo ka mid ah alaabada caanka ah.
Zhejiang Thor Electric Co., Ltd.waxaa ka go'an buuxinta shuruudaha amarka korantada iyo qalabka elektaroonigga ah ee Midowga Yurub (WEEE). Amarkani wuxuu u baahan yahay soo saarayaasha qalabka korontada iyo korantada si ay u maalgeliyaan dib-u-isticmaalka dib-u-isticmaalka ama dib-u-warshadaynta alaabooyinkooda la dhigay suuqa Midowga Yurub wixii ka dambeeyay 2005.